မိုးစက်ပွင့်: ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သော မဟာအတွေးအခေါ်ကြီးများ ( The Great Transformation)
ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်သော မဟာအတွေးအခေါ်ကြီးများ ( The Great Transformation)
ဖတ်သမျှစာတွေ ဦးနှောက်ထဲမှာ ကြက်ပျောက်ငှက်ပျောက်ဖြစ်တတ်လွန်းလို့ အီး-မှတ်စုကလေး ထုတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအထဲက အတွေးအခေါ်အချိူ့ကို ဥာဏ်ပညာ လိုက်မမီနိုင်သေးကြောင်း ၀န်ခံအပ်ပါတယ်။
စာအုပ်က Karen Armstrong ရေးသားတဲ့ "The Great Transformation" ဖြစ်ပြီး 2006 ခုနှစ်မှာ Alfread A. Knopf ပုံနှိပ်တိုက်ကနေထုတ်ဝေပါတယ်။ စာရေးဆရာမ Karen က အဖွင့်မှာ ဒီလိုပြောထားပါတယ်။ " Religion, .............., often seems to reflect the violence and desperation of our times. Almost everyday we see examples of religiously motivated terrorism, hatred, and intolerance." ဆိုပြီး သူမစာအုပ်ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက် တစိတ်အဒေသကို ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ နက်ရှိုင်းတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေကနေ ယုံကြည်မှုတွေ ဖြစ်လာတယ်၊ ယုံကြည်မှုကနေ ဘာသာရေး ဆိုတာ ပေါ်ထွန်းလာတာမို့ အတွေးအခေါ်တွေရဲ့ သမိုင်းကြောင်းမပိုင်လို့ ဘာသာရေးအစာမကြေဖြစ်ပြီး အော့ကြ အန်ကြ အဆိပ်တောက်ကြတဲ့ သူတွေကို တားဆီးဖို့ ရည်ရွယ်တယ်လို့ နားလည်ရပါတယ်။
ပြီးတော့သူမက ".....a study of this distant period can only be the exercise in "spiritual archaeology" when what we need is to createamore innovative faith that reflects the realities of our own world" လို့ ဆက်ပြောထားပါတယ်။ ဒီအခြေခံကျတဲ့ အတွေးအခေါ်တွေရဲ့ အနှစ်သာရကို တူးဆွပြီး သမိုင်းစဉ်နဲ့ယှဉ်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့ လက်တွေ့အခြေအနေနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ အယူအဆကောင်းများ ပေါ်ထွန်းလာလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ် -တဲ့။
ပထမဦးဆုံး ( Axial People) ဆိုတဲ့ အခန်းမှာ ဘီစီ ၄၅၀၀မှ ၉၀၀ အတွင်း အခြေခံအကြောင်းအရာတွေနဲ့ ခြေဆင်းပျိူး တင်ပြထားပါတယ်။ ဘီစီ ၄၅၀၀ ကစလို့ အာရယန် 'Aryan'လို့ခေါ်တဲ့ ခြေသလုံးအိမ်တိုင် လူမျိူးတွေဟာ ရုရှတောင်ပိုင်းက စတက်ပ် ( Steppes ) မြက်ခင်းတွေမှာ လှည့်လည် နေထိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။ အာရယန်ဟာ မျိူးနွယ်စုတခုရဲ့ အမည်မဟုတ်ဘဲ "honourable" "noble" လို့ သဘောအဓိပ္မါယ်ဆောင်ပါသတဲ့။ သူတို့ ပြောတဲ့ စကားကနေ အာရှနဲ့ ဥရောပဘာသာအများအပြား ပေါ်ထွန်းလာခဲ့လို့ Avestan ခေါ် Indo-Europeans လို့ လည်းလူသိများပါတယ်။ အာရယန်တွေဟာ အေးချမ်းစွာ နေထိုင်တတ်တဲ့ သဘာဝ ရှိတဲ့အတွက် အနည်းငယ် အသေးစားခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုများကလွဲလို့ အုပ်စုလိုက်စစ်ပွဲဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူးတဲ့။ အစပိုင်းမှာ သူတို့က ( Dyaus Pitr ) လို့ခေါ်တဲ့ ဖန်ဆင်းရှင်ကို ပူဇော်ကြပါတယ်။ နောက်ပိုင်းမှာတော့ လူတွေနဲ့ ပိုနီးစပ်တဲ့ “ဒေ၀”တွေကို ပူဇော်လာကြတယ်။ ဒေ၀ ဟာ ဒီနေ့ပြောနေတဲ့ gods အဆင့်ကို မရောက်သေးပါဘူး။ ဒေ၀ အမျိူးမျိူး ကတော့-
- Varuna လို့ ခေါ်တဲ့ စကြ၀ဠာကို အစီအစဉ်တကျအုပ်ချူပ်သူနတ်
- Mithra လို့ခေါ်တဲ့ မုန်တိုင်း၊ မိုးကြိုး၊ မိုးရွာသွန်းမှုဆိုင်ရာနတ်
- Mazda ခေါ် တရားမျ၏ျတမှု၊ ပညာရှိမှု၊ နေနဲ့ တာရာတွေ ဆိုင်ရာနတ် နဲ့
- Agni ခေါ် မီး နတ် တို့ပဲ ဖြစ်ကြပါတယ်။
သူတို့ ယုံကြည်တာ အစပိုင်းမှာ ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အလိုအရ ဒေ၀တွေဟာ ကောင်းကင်ကြီးကို ပထမဆုံး ဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ နောက်မှ မြေကြီး၊ ရေ တို့ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ နောက် အပင်တပင်၊ နွားသိုးတကောင်၊ နဲ့ လူတယောက် ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တယ် တဲ့။ နောက်ဆုံးမှာ မီး ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အဲဒါတွေဟာ အစပိုင်းမှာ အသက်ဝိဥာဉ်မရှိသေးဘူး။ ဒေ၀တွေက အပင်၊နွားသိုး နဲ့ လူ တို့ကို ကြိတ်ချေလိုက်တော့မှ နေတွေဟာ ပူလာတယ်။ ရာသီဥတုတွေ ဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ အစတေးခံရတဲ့ အရာတွေရဲ့နေရာများ သက်ရှိ အမျိူးတူတွေ ပေါ်လာတယ် တဲ့။ ဥပမာ- အပင်ရဲ့နေရာမှာ သီးနှံတွေ၊ ပန်းပွင့်တွေ၊ နွားသိုးရဲ့နေရာမှာ တိရိစ္ဆာန်မျိူးစုံ၊ နဲ့ လူသားမျိူးနွယ်တခုလုံး ပေါ်ထွန်းလာပါသတဲ့။ ယာဇ်ပူဇော်တဲ့ အလေ့က အဲဒီကနေ ပေါက်ဖွားလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘီစီ ၁၅၀၀ လောက်မှာတော့ အာရယန်တွေဟာ မက်ဆိုပိုတေးမီးယား နဲ့ အာမေးနီးယားက လူမျိူးတွေနဲ့ ကုန်သွယ်မှု ပြုလာကြတယ်။ ကြေးလက်နက်တွေ သုံးတတ်လာသလို ၊ နွားလှည်းတွေ၊ မြင်းရထားတွေ အသုံးပြုတတ်လာခဲ့လို့ မြန်မြန်ဆန်ဆန် ခရီးသွားလာနိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကနေပဲ စစ်တိုက်တဲ့ အလေ့အထတွေ၊ တခြားမျိူးနွယ်စုရဲ့ ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ တိုက်ခိုက်သိမ်းယူတာတွေ၊ စစ်တိုက်လို့ရလာတဲ့ ဥစ္စာပစ္စည်းတွေကို ပွဲလမ်းသဘင်ပြုပြီး ဂုဏ်တုဂုဏ်ပြိုင် ကြွားဝါမှူတွေ ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တော့တယ်။ အဲဒီမှာ Indra လို့ ခေါ်တဲ့ စစ်နတ် ယုံကြည်မှု ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ စစ်ပွဲနဲ့ လုယက်မှုတွေ ကြီးစိုးလာတဲ့အခါ လိုအပ်ချက်အရ Zoroaster ဆိုတဲ့ အသက် ၃၀ အရွယ် တမန်တော်တယောက်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့ပါတယ်.။ သူက Mazda ဆိုတဲ့ တရားမျှတမှုနတ်နဲ့ တွေ့ဆုံခဲ့တယ် လို့ ဆိုပါတယ်။ Mazda နတ်ဟာ တုန့်ပြန်စစ်ပွဲကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီး သူ့ရဲ့ ကောင်းချီးပေးမယ်လို့ ပြောပါတယ်။ Zoroastrianism ၀ါဒဟာ သူအသတ်ခံရပြီးတဲ့နောက် အီရန်တောင်ပိုင်းများ ပြန့်ပွား ထွန်းကားခဲ့ပါတယ်။
နောက်ပိုင်းမှာ သက္ကတ( Sanskrit )ဘာသာစကားပြောတဲ့ အာရယန်တွေဟာ အာဖဂန်နစ္စတန်ကို ဖြတ်ကျော်ပြီး "Land of Seven Rivers" လို့ခေါ်တဲ့ အခု အိန္ဒိယပြည်က ပန်ဂျပ်ပြည်နယ် အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်းကို တစိမ့်စိမ့် ထိုးဖေါက် ရောက်ရှိလာပါတော့တယ်။ အိန္ဒုမြစ်ဝှမ်း အင်ပါယာဟာ အလွန်ကျယ်ပြန့်ပြီး အတိုးတက်ဆုံးမြို့တော်နှစ်ခုကို (Mohanjo-Daro) နံ့ (Harappa)မှာ တွေ့ရပါတယ်။ ရွှေ၊ ကြေးနီ၊ ကြေးဝါ၊ သံဖြူ ကျွန်းသစ်၊ ဆင်စွယ်၊ လာပစ်လာဇူလီ၊ ချည်ထည်တို့ကို မက်ဆိုပိုတေးမီးယားဒေသနဲ့ ကုန်သွယ်ခဲ့ပါသတဲ့။ အာရယန်တွေ ရောက်ပြီး မကြာခင်မှာဘဲ ရစ်ဝေဒ (Rig Veda ) "Knowledge in Verse" လို့ခေါ်တဲ့ အပိုဒ်ပေါင်း ၁၀၂၈ ပိုဒ်ပါ ကျမ်းစာကြီး ပေါ်ထွန်းခဲ့ပါတယ်။ မူလက ကျမ်းစာတွေဟာ အာဂုံဆောင် လက်ဆင့်ကမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပြီး နောက်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာမှ စာပေအသွင်ပေါ်ထွန်းလာခဲ့တာပါ။ အာရိယန်တွေဟာ “ခတ္တိယ“ မင်းမျိူးတွေလို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတ်မှတ်ပြီး ကုန်သည်နဲ့ လယ်သမားတွေကို ”၀တ်သ”၊ ဒေသခံ ဒရာဗီးဒီးယန်း လူမျိူးတွေကို “သုဒ္ဒ” ကျွန်မျိူးအဖြစ်ဇာတ်ခွဲထားပါတယ်။ မီးဖိုသုံးခုနဲ့ နတ်ဒေ၀တာတွေကို ပူဇော်တဲ့ အလေ့အထ ရှိပါတယ်။
ဒါကတော့ Axial Age မတိုင်မီ အခြေအနေတွေပါ။ အဲဒီ အခြေအနေကမှ အတွေးအခေါ်မြင့်မားသော မဟာလူသားတွေ ပေါ်ပေါက်လာပြီး ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်နိုင်တဲ့ အယူအဆကြီးတွေ ပေါ်ထွန်းခဲ့ရတယ် လို့ ဆိုပါတယ်။
သူမ အဓိကထားပြီးလေ့လာတင်ပြခဲ့တဲ့ အချိန်ကာလကတော့ ဂျာမန် တွေးခေါ်ပညာရှင် Karl Jespers က Axial Age* လို့ အမည်ပေးထားတဲ့ BC- 900 မှ 200 အတွင်း ကာလပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကနေ့ခေတ် အထိ တွင်ကျယ်နေတဲ့ အတွေးအခေါ်အသီးသီးကို အုဌ်မြစ်ချခဲ့တာမို့ ”သုခမိန်ခေတ်” လို့ အနက်ဖွင့်ရလေမလားမသိ။ Axial Age ရဲ့ အဓိက အတွေးအခေါ်ကြီးများကို လေးပိုင်း ပိုင်းထားပါတယ်။ ဒါတွေကတော့......
1. Confuciousnism & Daoism (China)
2. Hinduism & Buddhism ( India)
3. Monotheism ( Israel)
4. Philosophical Rationalism ( Greece)
အတွေးအခေါ်တွေကို တင်ပြတဲ့အခါမှာတော့ အမျိူးအစားတခုကို အစဆုံးမရေးပဲ တစ်ပိုင်းစီကို ရာစုနှစ်ခေတ်အလိုက် ယှဉ်ယှဉ်ပြီး ရေးထားတာက အကန့်အကန့် နဲ့မို့ ခေတ်ပြိုင်အခြေအနေတွေကို ဖတ်သူ မျက်စေ့ထဲမှာ ရှင်းလင်းမြင်သာစေပြီး၊ နေရာဒေသနဲ့ အကြောင်းအရာ အပြောင်းအလဲလေးတွေက စာဖတ်သူရဲ့ စိတ်အာရုံဖိစီးမှုကိုလည်း သက်သာစေတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
( မှတ်စုထုတ်မပြီးခင်မှာ စာအုပ်နဲ့ ခွဲခွာခဲ့ရတာမို့ တခုချင်းကို အသေးစိတ် မရေးနိုင်တော့ပါဘူး။ ကွန်ဖြူးရှပ်အကြောင်းကို တော်တော် ရေးထားတယ်။ ဗုဒ္စအကြောင်းကတော့ ခပ်ပါးပါး၊ ဗုဒ္စ၀င်သမိုင်းရဲ့ ၂% လောက်က တော့ ကိုယ်သိထားတာနဲ့ နဲနဲကွဲတယ်။ နောင် အခွင့်ရမှ ရှာဖတ်ပါဦးမယ်။ သူငယ်ချင်းတို့လဲ ဖတ်ကြည့်ပါဦး လို့ - လက်တို့ပါတယ်)
* "the spiritual foundations of humanity were laid simultaneously and independently... And these are the foundations upon which humanity still subsists today". ( Wiki pedia)
Posted by Me at 15:48